Puntland oo beenisay War kasoo baxay Xukuumadda Soomaaliya | Dayniile.com
Home Warkii Puntland oo beenisay War kasoo baxay Xukuumadda Soomaaliya
Kadib markii Hay’adda Qaran ee ka digista halis wadareedka ee hoostagta Wasaaradda Gargaarka, maareynta & musiibooyinka Xukuumadda Somalia ay shaacisay in Goboo katirsan Puntland ay kusoo wajahan tahay duufaan xoogan ayaa waxaa warkaasi beeniyay Maamulka Puntland.
Hay’adda Maaraynta Musiibooyinka Puntland ee HADMA ayaa War kasoo baxay waxaa lagu sheegay in waxba waxba kama jiraan ay tahay war ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku saabsan duufaan ku soo wajahan Puntland.
Guddoomiyaha hay’adda Musiibooyinka Puntland ee HADMA Cabdullaahi Cabdiraxmaan Axmed (Ceerow) oo la hadlay Warbaahinta ka howlgasha degaannada Puntland ayaa sheegay in aysan garaneyn halka ay dowladda Soomaliya ka keentay warkaas oo ah mid aan waxba kajirin.
” Annagu ma hayno duufaantaas mana garanayno meesha ay ka keeneen, Waxaan idiin xaqiijinayaa in aysan waxba ka jirin wararkaas isla markaana aan hadda cabsi laga qabin duufaano” ayuu yiri Guddoomiye Ceerow.
Puntland ayaa dhowr jeer waxaa degaannadeeda ka dhacay duufaano xoogan oo dhibaatooyin kala duwan geystay, kuwaas oo qaarkood ay hora uga digtay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Booliiska Uganda oo Soomaali u xiray Qaraxyo lagu qabtay Hoteel uu...
Booliska Uganda oo wada howlgallo kaddib qaraxyadii toddobaad kahor ka dhacay dalkaas ayaa sheegay in ay xireen afar qof oo Soomaali ah oo ku...
DEGDEG :- Weriye Cabdicaziiz Afrika ayaa u geeriyooday dhaawac culus oo...
Raisal wasaare rooble oo ku adkeystay magacaabista Wasiirka ammniga iyo Taliyaha...
Dowladda oo sheegtay in howlgal lagu dilay Xubno Shabaab ah